DAAWO: OBAMA oo jeediyay khudbadiisii ugu danbaysay iyo ilinta oo isdhaaftay goobtii .. - www.xogtashacabka24.com | www.xogtashacabka24.com DAAWO: OBAMA oo jeediyay khudbadiisii ugu danbaysay iyo ilinta oo isdhaaftay goobtii .. - www.xogtashacabka24.com
DAAWO: OBAMA oo jeediyay khudbadiisii ugu danbaysay iyo ilinta oo isdhaaftay goobtii ..
Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Barack Obama oo xilkiisu ku egyahay 20 bishan janaayo 2017 ka ayaa wuxuu jeediyay khudbadiisii ugu danbaysay inta uu xilka madaxwaynenimo hayo.
Goobta uu khudbada ka jeedinayay ayaa waxaa ka muuqanayay dad asalkoodu madow maraykan ah yahay oo ilintu ka qubanayso.
Madaxwayne Obama ayaa wuxuu khudbadiisa kaga hadlay arrimo badan ayaa waxaa kamid ahaa waxyaabaha uu ka hadlay;
ISBADALKA: Obama ayaa wuxuu sheegay markuu arkay sida ay dadku u dadaalayaan isla markaasna ugu qanacsanyihiin isbadalka in uu dareemay muhiimada ay leedahay in dadka caadiga ah ay ka qayb qaataan isbadalka.
Obama ayaa wuxuu sidoo kale xusay awooda uu leeyahay isbadalku iyo in uu isbadalkaasi ku yimid dadaal ay sameeyeen dadkii ka horeeyay oo dadaal badan u galay in la gaadho heerka maanta la taaganyahay.
CUDUDA NUCLEARKA: Obama ayaa sheegay in cududa iyo awooda Nuclearka ee dalka Maraykanku yahay mid aan lala sinayn isla markaasna sareeya.
KOBOCA MARAYKANKA: Obama ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay in maraykanku yahay mid ka wanaagsan sidii uu ahaa wakhtigii uu xilka qabtay sideed sano ka hor isagoo sheegay in ay dumuqraadiyadu shaqaysay isla markaasna aysan ahayn mid fudud in ay shaqayso dimuqraadiyadau mararka qaarkoodna laga yaabo in uu dhiig ku daadto raadinta dimuqraadiyada.
SHAQO LA AANTA: Madaxwaynaha ayaa wuxuu sheegay in heerka shaqo la aanta dadka reer maraykan ay gaadhay heerkii ugu hooseeyay ee abid ay gaadhaan dadka maraykanka ah ee shaqao la aanta ah.
halkan riix oo akhriso warbixintan oo English ah..